eNasha.com - श्रीमतीलाई नचिन्दा...
एउटा दुर्घटनामा परेपछि लोग्नेलाई समेत नचिनेको कथा त तपाइँले शायद चलचित्रको पर्दामा हेरिसक्नु भयो । जस्तो कि 'सपना' चलचित्रमा करिश्मा मानन्धरले आफ्नो श्रीमान् शिव श्रेष्ठसँगको वैवाहिक जीवन बिर्सिएर भुवन केसीसँग प्रीति गाँस्न थाल्छिन् । अनि भर्खरै रिलिज भएको हिन्दी चलचित्र 'सलाम-ऐ-इश्क'मा नायिका विद्या वालनले आफ्नो लोग्ने जोन अब्राहमलाई एउटा सडक दुर्घटनापछि चिन्दिनन् ।
यस्तो कथा चलचित्रको पर्दामा मात्र हुन्छ कि वास्तविक जीवनमा पनि घट्छ ? यो प्रश्न तपाइँको मनमा लागेको छ भने आउनुहोस्, म तपाइँलाई चीनको हेनान प्रान्तस्थित जिनयाङ शहरका वेइ गुआन्जीको घटना सुनाउँछु । गुआन्जीको मोटर साइकल दुर्घटना भएपछि जब अस्पतालमा आँखा खोले उनले आफ्नी श्रीमती र छोरीलाई समेत चिनेनन् ।
उनले आफ्नो मोटरसाइकल विजुलीबत्तिको पोष्टमा ठोक्काएका थिए र उनी त्यहीँ बेहोस भए । त्यसपछि केही मान्छेले उनलाई बोकेर अस्पताल पुर्‍याए । लोग्नेको दुर्घटना थाहा पाएर हतार हतार अस्पताल आएकी श्रीमती याङ जिङलाई चिन्न अस्वीकार गरेको खबर इष्टर्न टुडे अखबारले जनाएको छ ।
तर दुइ दिनपछि गुआन्जीले विस्तारै आफ्नो काम र अफिस सम्झिए तर श्रीमतीलाई अझै पनि चिन्न सकेका छैनन् । विगत नौ वर्षदेखि सफल वैवाहिक जीवन बिताइरहेको तर एक्कासि श्रीमानले चिन्न छाडेकोमा याङलाई पर्नु पीर परेको छ ।
याङले भनिन्- "उनले सबैथोक सम्झिरहेका छन्, उनलाई भेट्न आएका मान्छेहरु, उनका अफिसका साथीहरु तर मलाई मात्र अचम्म मानेर हेर्ने गर्छन् ।"
सबैभन्दा ठट्टा त त्यतिबेला भयो, जब गुआन्जीले श्रीमती र छोरीतर्फ औँल्याउँदै सोधे- यिनीहरु को हुन् ? यी आइआइसँग त मेरो भेट भएजस्तो लागेन ।" याङ त्यतिबेला छाँगाबाट खसेजस्ती भइन् ।
"मैले उनलाई हाम्रो बिहेको फोटो देखाएँ र उनलाई सोधेँ, मसँग बिहे गर्ने यो पुरुष को हो ? तब उनले भने- 'ए चिनेँ, यो पुरुष मेरो सानोको स्कूल पढ्ने साथी हो ।'" याङले श्रीमानको खुस्किएको मगजबारे बताइन् ।
गुआन्जीले श्रीमतीलाई भात पकाउन पनि दिएका छैनन् । श्रीमतीलाई उनले एक पटक भने- "तपाइँ मेरो घरको अतिथि हुनुहुन्छ, कसरी तपाइँले मलाई खाना बनाउन सक्नु हुन्छ ? मलाई पाप लाग्दैन ?"
जियाङ अस्पतालका मुख्य सर्जनले गुआन्जीको यो व्यवहारलाई 'व्याख्या गर्न नसकिने अवस्था' बताएका छन् ।
श्रीमानश्रीमती परिस्थिति माया सुन्दरी सेलेब्रिटी गुगल विज्ञापन भव्यता इन्टरनेट नग्नता मूर्ख्याइँ बलिउड फट्याइँ उदेकलाग्दो उपाय हलिउड कीर्तिमान मुद्दा मामिला उदारता यस्तो पनि !